Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » प्रधानमन्त्री ओलीको सूत्र-अप्ठ्यारोमा परेपछि राजीनामाको फन्डा
प्रधानमन्त्री ओलीको सूत्र-अप्ठ्यारोमा परेपछि राजीनामाको फन्डा
काठमाडौं- ‘तपाईंहरु विचार गर्नुस्, के अहिले मैले राजीनामा दिन हुन्छ? राजीनामा दिन मिल्छ? मेरो लागि होइन, देशको लागि मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु हो।’
राजदूत नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य थप, कर्णाली विद्रोह, भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुखसँग बालुवाटारमै प्रधानमन्त्रीद्वारा भेट, पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका सचिव मुकेश चौरसियाको हत्या लगायतका विषयले नेकपाभित्र विवादको आगोमा घ्युको काम गरिरहेको छ।
राजदूत नियुक्ति तथा मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य थप गर्दा प्रचण्डले हिस्सा पाएनन्। पछिल्लो असमझदारीको सूत्रपात पनि त्यहीँबाट सुरु भएको हो। बिस्तारै, प्रचण्ड पक्षका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री रहेको कर्णाली प्रदेशमा ओली पक्षका नेता यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा विद्रोहको प्रयास भयो। १८ जना प्रदेश सभा सदस्यले पार्टी संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए। त्यसबाट सिर्जित विवाद र अविश्वासको निरुपण अहिलेसम्म भइसकेको छैन।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पार्टी पदाधिकारीलाई काठमाडौं बोलाएर धारणा सुनियो। तर अध्यक्षद्वयबीच समान धारणा बन्न नसक्दा फरकफरक निर्देशन सहितको पत्र पठाइयो। अर्कोतिर, कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी अन्तिम चरणमा छ।
यसैबीच नेकपा विभाजनको चर्चा भने चुलिएको छ। विभाजन नै हुने सम्भावना त न्यून देखिन्छ। तर, शीर्ष नेताहरुले नै त्यसलाई उछालिरहेका छन्। केही दिनयता उनीहरु पार्टीभित्रको विवादलाई आन्तरिक छलफलमा होइन, सामाजिक सञ्जालमा पोखिरहेका छन्।
र, पार्टी विभाजन संकटमा परेको, फलानो पक्ष जिम्मेवार रहेको, फलानो नेताले जिम्मेवारी पूरा नगरेको, फलानो नेताले विवादमा फेसो ठोकेको जस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यसमा पार्टीका प्रवक्ता र महासचिवदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म व्यक्त देखिन्छन्।
गत असार १० गते सुरु नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक ओलीका लागि प्रतिकूल हुने आकलन थियो। अध्यादेशदेखि भ्रष्टाचारसम्मका अनेक विषयले नेकपा नेताहरु कतिबेला बैठक बस्ला र बोलौंला भनेर बसिरहेका थिए। आफ्नो आलोचना हुने राजीनामा मागिने बुझेपछि ओलीले सदस्यहरुको बोल्ने पालो सुरु नुहँदै राजीनामाको विषयलाई चर्चामा ल्याए ।
बैठकको पहिलो दिन अध्यक्षद्वयको सम्बोधनको कार्यतालिका थियो। आफ्नो सम्बोधनमा बेसारको विषयमा समेत आलोचना गरिएको सडकबाट राजीनामा मागिएको बताए। ‘के अब बेसारकै नाममा राजीनामा दिने?’, उनको प्रश्न थियो।
उनी त्यतिमै रोकिएनन्। असार १४ गते मदन भण्डारी फाउण्डेसनद्वारा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले नयाँ नक्सा जारी गरेबापत भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको र त्यसमा पार्टीका नेताहरुले सघाएको अभिव्यक्ति दिए। तर आफूले पद नछाड्ने स्पष्ट पारे। ‘मलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसिरहन मन छैन तर यही बेलामा हट्ने हो भने नेपालको पक्षमा बोल्ने आँट कसैले गर्ने छैन। किनभने भोलिपल्ट बर्खास्त हुन्छ’, उनले भनेका थिए, ‘त्यसैले मैले आजका लागि होइन, भोलिका लागि र आफ्ना लागि होइन देशका लागि काम गरेको हो।’
सार्वजनिक सम्बोधनमा पनि उनले राजीनामाको प्रसंग जोड्ने गरेका छन्। गत वर्ष फागुन ४ गते उनले गृह जिल्ला झापाको दमक नगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ‘सरकार ढाल्ने षडयन्त्र’ भएको तर ‘सरकारलाई कसैले हल्लाउन नसक्ने’ तथा ‘हामी अगाडि बढ्यौं, बढ्यौं’ भनेका थिए।
‘तपाईंहरूलाई लाग्ला, सरकारसँग बलियो बहुमत छ। बहुमत भए पनि फर्की–फर्कीकन उनीहरू यो सरकारलाई असफल पार्ने, ढाल्ने, बदनाम गर्ने षड्यन्त्रमा लागिरहेका छन्’, उनको अभिव्यक्ति थियो।
त्यतिबेला पार्टीमा ओली विरुद्धको गठबन्धन बलियो भएको थियो। सो गठबन्धनकै गोप्य बैठकले तय गरेका रणनीतिहरु पार्टीमा प्रभावी बन्न थालेका थिए। गठबन्धनलाई तोड्न उनलाई सफलता मिलिरहेको थिएन।
केही समयअघि मात्रै ओलीको चाहना विपरीत सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भएका थिए। २०७६ माघ १५ देखि १९ सम्म सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उनले प्रशस्त आलोचना खेपेका थिए। एमसिसीका विषयमा ओलीको चाहना विपरीत कार्यदल गठन भएको थियो।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य प्रधानमन्त्री ओली झुक्याउन सिपालु रहेको बताउँछिन्। ‘उहाँको अधिक समय कसरी झुक्याउने, तर्साउने, छक्याउने, भ्रम दिने होला भनेर सोचेरै बित्ने गरेको छ। त्यसैले फ्याट्टफ्याट्ट यस्ता (राजीनामा) कुरा ल्याउने गर्नुहुन्छ। अनि त्यसैलाई विवाद र छलफलको विषय बनाइदिनुहुन्छ’, उनले भनिन्।
‘आफू कमजोर भएपछि छायाले पनि लखेट्छ भन्छन्। अरुलाई दोष दिएर आफ्नो कमजोरी लुकाउन मिल्दैन। पाइँदैन। आफूभित्र सम्पूर्ण दोष छ। अनि त्यसलाई लुकाउने र अरुलाई दोष दिएर आफू चोखिने गर्न मिल्दैन’, शाक्यको भनाइ छ।
बरु प्रधानमन्त्रीको आलोचना उनको कार्यशैलीलाई लिएर बढिरहेको छ। उनी आफ्नै कारण आलोचनामा छन्। वाचा अनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। सुशासनको विश्वास दिलाउन सकेका छैनन्। संवैधानिक प्रावधान अनुसार नागरिकको हक सुरक्षित गर्न सकेका छैनन्।
संकटमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा उनी आफैंसँग डराएजस्तो देखिन्छन्। शाक्यका अनुसार, प्रधानमन्त्रीलाई डर लागेको र सेन्टिमेन्ट लिन राजीनामाको विषय उठाएका हुन्। यो लेख नेपाल लाइभबाट साभार गरिएको हो ।